Murume wangu anorova doro remusombodhiya
You are at:Home»NHAU DZEKUMATARE»Murume wangu anorova doro remusombodhiya
By Munyori weKwayedza on	 September 16, 2016 · NHAU DZEKUMATARE
MUMWE mudzimai akachema-chema mudare achiti ashaiswa rugare nemurume wake uyo waanoti anonwa doro rekangopisa rinodaidzwa nekuti musombodhiya.Irene Muzanenhamo akamhan’arira Richard Ruzongazi kuHarare Civil Court achimupomera mhosva yekumushungurudza.
Muzanenhamo akati kumba kwavo hakuchadyiwe rinopisa nekuda kwehunhu hwemurume wake.
“Murume wangu anonwa doro remusombodhiya nekuputa fodya. Kana adhakwa pamusha hapagarike. Anotanga kutukirira zvinyadzi pamberi pevana zvekuti ndinopedzisira ndanopotera kumaraini nekuti ndikasadaro mhere-mhere yacho haipere,” akadaro Muzanenhamo.
Akaenderera mberi achiti: “Anouya akadhakwa, asingagone kana kufamba, otifugura jira nevana. Chero muna Chikumi chando chichitonhora, anotitorera machira.”
Muzanenhamo akakumbira dare kuti rimubatsire achiti anotya kuti anopedzisira aurayiwa naRuzongazi.
“Ndibatsireiwo ndiri panguva yakaoma. Vachandiuraya baba ivava ndikaramba ndichigarisana navo pasina danho remutemo ratorwa,” akadaro Muzanenhamo.
Ruzongadzi akaudza dare kuti mudzimai wake akangomurova kaviri chete mumakore masere avagara vose.
“Mukadzi wangu ndakangomurova kaviri chete mumakore masere atagarisana. Nyaya yandakamurovera yaiva yekuti akange obva kubasa kwaaitengesa pakati pehusiku zvinova zvinhu zvandaivenga chaizvo. Doro ndinonwa zvangu asi kwete musombodhiya waari kutaura,” akadaro.
Mutongi Yeukai Dzuda akapa Muzanemhamo gwaro redziviriro.